Kedu ka m ga-esi nwetaghachi akwụkwọ ndekọ GOV dị elu?
Ịnata nnukwu ihe ndekọ GOV ndị dị na GOV nwere ike ibuli ọkwa ebe nrụọrụ weebụ gị dị oke mkpa. Ma, rịba ama na inweta ha bụ ọrụ siri ike ma na-ewe oge. Ma, n'ezie, ụfọdụ ndị ka na-arụrịta ụka na Google ejighị aka ndị EDU zuru ezu ma ọ bụ ntụpọ GOV backlinks dị iche. Ka o sina dị, òkè ọdụm ma ọ bụ ezigbo uru na SEO na-eche ma ọ bụghị. Ntak-a? Ọ dị mma, ka anyị were ya na Google anaghị amata ha karịa ọkwa ndị ọzọ a maara nke ọma (e - hospedagem gratis para wordpress. g. , dot COM, NET ntụpọ, ma ọ bụ ntụpọ ORG). Ka o sina dị, ihe dị mkpa nke ndị na-agbaso GOV backlinks ga-enye ha nnukwu ibu na ike, tumadi site n'echiche nke Search Engine Optimization.
Ya mere, na-eleghara na ọ dịbeghị nkọwa nchịkọta ọ bụla nke Google nyere, ọ dịtụghị mgbe a ga-eleghara ihe kachasị mkpa nke akara ngosi GOV na GOV.N'ezie, ọtụtụ n'ime SEO pros dị ka grail nke njikọ njikọ dị ike, ebe ọ bụ na ha na-abịa site na ndị kasị tụkwasịrị obi ma na ọ bụ naanị na-ewetara na ebe nrụọrụ weebụ.
Uru Nhọrọ SEO
Ya mere, oleekwanụ maka uru SEO dị na akara azụ GOV? Ọfọn, ọ dịghị ndị nwere nnukwu ihe ha nwere. Mana nke a na-atụghị anya ya ka bụ eziokwu ruo n'ókè ụfọdụ. Ma, n'ezie, weebụsaịtị ma ọ bụ blog ọ bụla nwere ike ịnweta site na-enweghị gụnyere ndị backlinks na profaịlụ ha, ma ka na-adabere nke ọma na Google. Echere m na ọ bụrụ na ị nwere obi ụtọ iji nwetaghachi ihe ndekọ GOV ndị ọzọ, ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ blog ga-enwe ezigbo uru maka ịhapụ asọmpi ahụ, n'ihi ike gị siri ike. Ya mere, ịtụle uru ha bara maka SEO ebe a na-abịa nsogbu - ọ na-esiri ike ijikọta ya na ntanetị ngalaba na isi ntanetị nke ndị gọọmentị na-achị ma ọ bụ iwu ndị ọ bụla metụtara ya. Ihe bụ na ha agaghị ejikọta ya na onye ọ bụla n'enweghị ihe kpatara ya, maọbụ n'enweghị ezi ihe kpatara ya.
Dị ka m kwuwororịrị, ịnweta ọrụ backlinks nke ọchịchị bụ ọrụ siri ike na ọrụ oge. Ma ọ ka bụ ihe kwesịrị ekwesị, dịka ọ na-akwụ ụgwọ mgbe niile - ọ dị mma karịa ọ bụla ọzọ backlinks, ọbụna site na nke kacha mma Pagerank weebụsaịtị ma ọ bụ ngalaba kachasị ikike. Ya mere, tupu ịmalite, jide n'aka na ị nwetara ihe niile. Ana m ekwu na ebe nrụọrụ weebụ gị dị ugbu a ma ọ bụ ọdịnaya nke ibe weebụ kwesịrị ịbụ ihe ọmụma zuru oke, dị mkpa maka isiokwu bụ isi ma na-enye nnukwu ndị mmadụ ezigbo uru. Ọzọkwa, akwụkwọ weebụ gị kwesịrị ime nke ọma banyere SEO na saịtị na-adọrọ mmasị maka ntọala ndọrọ ndọrọ ọchịchị ahụ na saịtị ndị gọọmentị ha.
Nke mbụ, jide n'aka na profaịlụ azụlink ugbu a nke ebe nrụọrụ weebụ gị na-enwerịrị njikọ ụfọdụ PR, PA, na DA dị elu. N'ụzọ dị otú a, ị ga-aka mma inweta ndị ahụ dị oké ọnụ ahịa. Ime nke a, echefula na ịghọ onye na-arụ ọrụ ụlọ na-adị mma mgbe niile - ọbụlagodi na ọrụ anyị - iji mee ka ikike gị dị ike na ịmara ọkachamara dị mkpa iji dọtaghachi akara azụ GOV, ikekwe site na ebe ndị kachasị ike na ndị a pụrụ ịtụkwasị obi na Weebụ.
Ịchọ Right saịtị
Ozugbo ị kwenyesiri ike na ihe ọ bụla na ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ blog dị na ya, oge eruola ịchọta ebe nrụọrụ weebụ gọọmenti kwesịrị ekwesị iji jikọta na. Ihe bụ na e nwere ọtụtụ ihe nchịkọta ndị dị otú ahụ, kama ịkọ ọnụ ọgụgụ nke ntọala na ndị ọrụ gọọmentị. Ọ pụtara na ọ bụghị ihe niile dị n'ịntanetị na mpaghara GOV ndị GOV nwere ihe ọ bụla jikọrọ ya na ezigbo ọchịchị. Ya mere, na-achọ ebe kwesịrị ekwesị, ị ga-achọ ịnweta ọnụọgụ abụọ na ha ziri ezi. Kedu ka anyị ga - esi chọta ụlọ ọrụ dị adị na ihe ndị ọzọ dị mkpa? Enwere m ike ịchọta na "saịtị:. gov "dị elu na-eme mgbanwe ka i wee nwee ike idozi nlezianya anya karị.
Na-ekwu banyere Top Blogs / Websites
Ee, ịhapụ ikwu okwu banyere blọọgụ gọọmentị na weebụsaịtị bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma iji nweta ihe ndị ahụ dị oké ọnụ ahịa GOV backlinks. N'ezie, n'adịghị ka ị na-ekwu okwu ebe ọzọ iji nwetaghachi backlinks na nloghachi, nke ahụ ga-abụ ọrụ siri ike karị. Mana ọ ka bụ ụzọ eji eme ihe iji mezue ọrụ ahụ, ya mere enwere m ike ịkwado ya tupu ihe ọ bụla ọzọ.
Ya mere, ihe bụ na òkè ọdụm nke weebụsaịtị ma ọ bụ blọọgụ gọọmentị enweghị ohere maka ikwu okwu kpọmkwem. Ọ bụrụ na ha nwere nhọrọ a, agbanyeghị na nhọrọ ha na-ekwu ga-abịa na NoFollow. Ọ pụtara na ị ga-akwụ oge na mgbalị iji nweta saịtị kwesịrị ekwesị ma ọ bụ ibe weebụ ndị na-abụghị NoFollow. N'agbanyeghi eziokwu ahụ bụ na ohere gị nke inweta nnukwu akara ngosi GOV dị elu nke GOV nwere ike ịbụ ihe dị ntakịrị, na-ahapụ ikwu okwu ọnụ ahịa.Naanị jide n'aka na nkwupụta gị dị mkpa na ihe bara uru ma na-abịa n'enweghị mkparịta ụka.
Maka ohere kacha mma ịchọta ebe na-eme ka ihe DoFollow kwuo, ana m akwado iji "saịtị:. gov inurl: blog. "Tụkwasị na nke a, ọ bụghị naanị na ị na-agbalị ịnweta akara azụ GOV na nkwupụta, ị nwekwara ike iji ụfọdụ atụmatụ ndị ọzọ. Otú ọ dị, ọ bụghị na ị ga-achọ ihe dị egwu ma dị egwu. Ya mere, ka anyị nwee obere nchịkọta dị n'okpuru.
Gbalịa dee banyere otu n'ime ihe ndị na-esonụ:
Gọọmentị - dee otu isiokwu dị mma, merie ya nke ọma ma gwazie ụlọ ọrụ ahụ naanị. Iji maa atụ nke a, ka anyị were ya na ị na-agba ọsọ ụlọ ọrụ nke na-arụ ọrụ maka ume ọhụrụ, ma ọ bụ dịka ọmụmaatụ, ị bụ onye na-akwụ ụgwọ ụlọ nke ọma.N'ụzọ dị otú ahụ, ihe niile ị chọrọ ebe a bụ ịmepụta mkparịta ụka biputere gbasara ya ma ọ bụ isiokwu zuru ezu maka Ụlọọrụ nke Energy Renewable and Energy Efficiency. Ihe kpatara ya: ileba anya na ndị na-ege ntị na ụwa bụ ụzọ dị mma isi na ụlọ ọrụ gọọmenti ndị ọzọ.
Onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị - dịka usoro mbụ nke ederede ihe gbasara ụlọọrụ gọọmentị, ị nwere ohere ịme ihe nyocha ma ọ bụ dee banyere onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị a ma ama ma ọ bụ onye na-emekọrịta ihe metụtara iwu ọ bụla nke metụtara azụmahịa gị. Ejila oge na mgbalị gị dee banyere atụmanya nke iwu ụfọdụ a tụrụ aro n'oge na-adịbeghị anya, dịka ọmụmaatụ, nke dị mkpa maka isiokwu azụmahịa gị ma ọ bụ akụkụ metụtara ọrụ azụmahịa kachasị elu.Naanị ịmepụta ihe dị egwu ma jikọta ya na okwu ahụ na-ekwu maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ọ bụ onye na-ahụ maka ya. Mgbe ahụ, gwa ndị nwere mmasị gbasara akwụkwọ ọhụrụ gị.
Interview Interview - họrọ isiokwu dị mkpa ma jụọ onye otu n'ime ụlọ ọrụ mpaghara. Ọtụtụ mgbe, a ga-ekweta na ị ga-enwe mkparịta ụka ahụ, o doro anya na ị nwetara nkwurịta okwu kwesịrị ekwesị. N'ụzọ dị otú ahụ, ị ​​ga-enwe ike ịmepụta ya na weebụsaịtị ma ọ bụ blog gị na njikọ, nke na-ezo aka na ụlọ ọrụ gọọmenti ahụ. Rịba ama, na n'ọnọdụ ụfọdụ ma onye ahụ a gbara ajụjụ ọnụ n'onwe ya ma ọ bụ ụlọ ọrụ gọọmentị nwere ike ịmekọrịta ọnụahịa n'onwe ya. Ọ bụrụ na ọ ga - eme otú ahụ, ị ​​ga - enwe ike ịnwe ụfọdụ akara azụ GOV ndị ọzọ, ma e wezụga nke mbụ gị.
Mpempe akwụkwọ Nlekọta Ọhụrụ - na-agbalị ịbanye na kọntaktị ọzọ ma ọ bụ ịmepụta mmekọrịta ọhụrụ nke ọchịchị nwere ike ịghọ ụzọ dị oke mma iji nweta akara ngosi GOV ndị ọzọ na nke kachasị elu. O doro anya, ọ bụghị mgbe nile - ọ bụ na ihe niile a ga-adabere na mkpokọta weebụ ma ọ bụ blog gị. Ka o sina dị, mgbe ụfọdụ, ọ ga-abụ ohere mara mma maka ịbịakwute kọntaktị gọọmentị ọzọ. N'okpuru ọnọdụ ọ bụla, ịmepụta ntọhapụ ndị a na-ebipụta na redio na ụlọ ọrụ ahụ ka bara uru. N'ụzọ dị otú a, buru n'uche na ịmepụta mmekọrịta na ụlọ ọrụ gọọmentị bụkwa ihe bara uru. Dị ka o kwesịrị, nke a nwere ike iduga na akwụkwọ ndị ha na-ahụkarị na-ejikọta na ebe nrụọrụ weebụ azụmahịa gị ma ọ bụ blog nkwado.
Soro na Outreach - ị nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma na ịmepụta akwụkwọ enyemaka yana ohere ndị ọzọ, ma ọ bụ gbalịa ịnweta ndepụta ụfọdụ maka azụmahịa maka azụmahịa obodo.Ị nwere ike ịmepụta onwe gị, dịka ọmụmaatụ inye onyinye onyinye ebere ka edepụtara na ntinye aka raara onwe ya nye na njikọ bara uru nke na-ezo aka na ebe nrụọrụ weebụ ma ọ bụ blog gị.
Flattery - flattering ụlọ ọrụ gọọmentị na-enwekarị mgbe ọ na-enweta ụgwọ azụ azụ ndị ahụ dị oké ọnụ ahịa. Naanị ịmatakwu banyere isi ihe mgbu nke ụlọ ọrụ gọọmentị ma mee ka ị gwa ya kpọmkwem ihe ha ga-achọ ịnụ. N'ezie, ọ pụghị ịbụ ụzọ a ga-esi jide n'aka iji nweta akaraghachite GAG ​​ọzọ, ma ọ bụrụ na ị na-eche ụzọ ziri ezi - atụmatụ a na-arụ ọrụ nke ọma.
Mgbe niile, ị ga-achọ ijide n'aka na akara azụ GOV ọhụrụ gị adịghị emerụ ahụ. Echere m na ọ ga-enyo enyo maka Google mgbe ntanetị njikọ weebụsaịtị gị ma ọ bụ blog ga-eme ka ọ dịkwuo elu na ọtụtụ njikọ gọọmentị. Ya mere, ana m atụ aro inwe ndekọ abụọ na azụkọtara ọhụrụ ọ bụla na-eji ihe ọ bụla dị n'ịntanetị maka ụlọ njikọ na nchọpụta. N'etiti ndị ọzọ, achọtara m Open Site Explorer, Semalt Analyzer, na Frog Frog dị ka ihe bara uru maka na-agba ọsọ zuru ezu nyochaa blogs backlink profile. Nọgidenụ na-arụsi ọrụ ike, na-enwekwa obi ụtọ!